musha » ebook » Yemahara eBook: Kudzidziswa & Kudya Zvinovaka mukati Mukati Zvakavanzika zveMuviri Wakaonda
Tiri kupa FREE eBook yevadzidzi vedu! Iwe unogona kukopera Kurovedza & Nutrition Mukati Zvakavanzika zveMuviri Wakaonda, ne Mike Geary (a $ 17.99 kukosha) zvachose MAHARI!
Iyi eBook yakagadzirwa naMike Geary, anozivikanwa Certified Yemunhu Mudzidzisi uye Certified Nutrition Nyanzvi. Iri bhuku rakaputirwa rakapfuura anopfuura makumi maviri neshanu chaiwo metabolism-inosimudzira zvakavanzika zvaunogona kushandisa kubatsira kubvisa muviri wako wakasindimara mafuta emuviri. Iri bhuku rine akasiyana matipi ekurovedza muviri uye nzira dzekuvaka muviri kupaza mafuta emuviri uye kuendesa muviri wako padanho rinotevera. Dzvanya Pano kana chinongedzo pazasi kuti utarise bhuku racho kana kurudyi tinya chengeta sekuchengetedza iyi eBook pakombuta kana piritsi rako Inzwa wakasununguka kugovana bhuku iri neshamwari dzako uye nenhengo dzemhuri.